Steeti nke Ahịa akpaaka 2015 | Martech Zone
E nwere doro anya dị ka ike nke ahịa akpaaka ma ọ bụ a pụtara edochaghị na overused okwu na ihe fọrọ nke nta ọ bụla n'elu ikpo okwu na-akwalite ... Onlyfọdụ naanị jiri ya maka nnweta, ụfọdụ ahịa naanị, ụfọdụ ahịa, ụfọdụ njide. Ihe ntanetị ndị ọzọ enweghị isi ihe dịka isi ndu ma ọ bụ njikọta. Ma, dị ka infographic a na-egosi, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-efu ihe uru nke ahịa akpaaka kpamkpam.
Taa na mgbawa nke ọwa dijitalụ na teknụzụ ị na-emebi maka nhọrọ dịka ọnụọgụ dijitalụ. Automzụ ahịa akpaaka nwere ike inye aka mee ka ihe doo anya ka ị nọrọ n’elu ihe. Gaa na ihe omuma ihe omuma a iji nweta uzo di n’ime uwa nke ngwa ahia ugbua. Ọnọdụ Team
Maka ebumnuche ndị a, anyị anaghị enye ndị ahịa anyị ndụmọdụ ka ha soro kacha mma nke ìgwè ahịa akpaaka ngwọta. M mgbe egwuregwu na-ere a ahịa akpaaka ngwọta bụ a ọtụtụ dị ka na-ere a refrjiraeto a agụụ na-agụ onye… ọ bụ oké ma ọ dịghị aka ọ gwụla ma ha nwere nri ha ga-etinye na ya. Nri ahụ bụ atụmatụ na ọdịnaya yana oge iji mejuputa, nwalee ma nụchaa nsonaazụ. Platformsfọdụ nyiwe na-achọ mmepe ma ọ bụ mwekota ego na; na-enweghị, nanị agaghị enweta zuru nloghachi na ego.
Ọ dị oke mkpa na ị kọwaa ma nyochaa usoro gị na mpụga gị, njem ndị ahịa gị, akụ gị, na ahịa ahịa gị tupu ịbanye ọ bụla na ahịa ahịa akpaaka!
Tags: akụrụngwa ahịainfographic ahịa akpaakaỌnọdụ2ala nke na-ere ahịa akpaaka